Habib ukolula - China J ne K auto obona
Habib cover uphawu eziluncedo: inshorensi imoto 1.Indoor. 2.Fleece esemva ukunika ukhuseleko exta ukupeyinta yemoto. 3.It kuba nomoya ngokupheleleyo, ugcine imoto ngaphandle uthuli. 4.With ngaphambili kunye umqukumbelo diff elastic ukubamba isiciko imoto. 5.With ukubona eriyeli technology 6.cost Uluhlu: Usd35 to55 7.stretchability sinokunceda acheive ukuba kufanelekile Ukufudumala ukuya emotweni, bonisa inkangeleko ngesondo yemoto. ulwazi Material: Material angaba ngombala obomvu okanye emnyama okanye enye umbala ukhetha, ubunzima kungaba ukusuka 150gsm ukuba 200gsm njenge ...
Habib cover uphawu eziluncedo:
inshorensi imoto 1.Indoor.
2.Fleece esemva ukunika ukhuseleko exta ukupeyinta yemoto.
3.It kuba nomoya ngokupheleleyo, ugcine imoto ngaphandle uthuli.
5.With ukubona eriyeli technology
Uluhlu 6.cost: Usd35 to55
7.stretchability sinokunceda acheive ukuba kufanelekile Ukufudumala ukuya emotweni, bonisa inkangeleko ngesondo yemoto.
Izinto angaba ngombala obomvu okanye emnyama okanye enye umbala ukhetha, ubunzima kungaba ukusuka 150gsm ukuba 200gsm njengoko ukhetha, enzima ngakumbi nangakumbi elide, ezibizayo.
cover Car ingaba zingabi nalo, manzi, kunye UV anti, khon 'ukuze ugcine imoto yakho kude eluthulini, intaka nobulongwe umthi kwakunye imvula hazord ukukhusela ipeyinti emotweni yakhe, akhusele Kumbindi imoto, ezifana kwibhodi dash, inshorensi isihlalo . Gcina isela kude, ngamanye amaxesha, impahla yakho valueable mhlawumbi ikhuselwe kakhulu ngaphandle kokuba wabona lula kuba inshorensi ukufihla imoto yakho.
Previous: Layer Single Nonwoven In-
Okulandelayo: Habib ukolula 1
unogada Silver 68D
Habib ukolula 1